I-SONGZ Uhlolojikelele | ISongz Automobile Air Conditioning Co., Ltd.
I-SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTDlapha ebizwa nge-SONGZ, yasungulwa ngonyaka we-1998. Iyinkampani yamasheya ahlangene esebenza ngocwaningo, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa kanye nokuthengiswa kwezinhlelo zokupholisa umoya ezimotweni. Yabhaliswa ngempumelelo eShenzhen Stock Exchange ngo-2010. Isifinyezo sesitoko: SONGZ, ikhodi yesitoko: 002454. Lokhu kwenza i-SONGZ ibe yinkampani yokuqala efakwe ohlwini embonini yezokuthutha izimoto yaseChina. I-SONGZ izinikele ezinhlelweni zokupholisa umoya ezimotweni njengophawu lwe-premium futhi izoba umphakeli osezingeni lomhlaba ngobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu nangokucutshungulwa kwangaphakathi esikhathini esizayo esiseduze.
SONGZ Ibhizinisi lihlanganisa i-air conditioner kagesi futhi ejwayelekile emikhulu naphakathi, i-air conditioner yabagibeli, i-air transit air conditioner, amayunithi wefriji yeloli, i-compressor kagesi, nezingxenye zokungcebeleka zemoto.
I-SONGZ Amabhizinisi Ayisisekelo Ayisithupha
I-SONGZ Isizinda Sokukhiqiza
Ngesisekelo sokukhiqiza esingu-13, i-SONGZ isungule indawo egxile eShanghai, eChina futhi isuselwa eFinland, Indonesia naseChina e-Anhui, Chongqing, Wuhan, Liuzhou, Chengdu, Beijing, Xiamen, Suzhou nakwamanye amadolobha. Inani labasebenzi selingaphezu kuka-3 000.
I-SONGZ HQ, iShanghai China
I-SONGZ Ubukhona Bemakethe Yomhlaba Wonke
Imikhiqizo yokupholisa umoya ngebhasi ye-SONGZ inikezwe cishe bonke abakhiqizi bamabhasi e-China, njenge-Yutong, i-BYD, i-Golden Dragon, i-Zhongtong, njll. Imikhiqizo ithunyelwa emazweni angaphezu kwama-40, kufaka phakathi amazwe aseYurophu afana neRussia, iNgilandi, i-Italy, kanye namazwe aseNordic, amazwe aseMelika afana neMexico, iBrazil, iChile, iColombia, ne-Ecuador, amazwe ase-Asia afana neJapan, iSouth Korea, iNdiya, iMalaysia, i-Indonesia, iThailand neVietnam, futhi athunyelwa e-Australia naseNew Zealand.
Ngasikhathi sinye, siqongelele inqwaba yezinsizakusebenza zamakhasimende emkhakheni webhizinisi wemoto yokugibela yemoto yabagibeli, izitimela zokuthambisa umoya wezimoto namayunithi efriji eloli.
IKIWI New Zealand
I-SONGZ Amaklayenti Amakhulu Omakhi Webhasi
Umkhiqizo ubonwe kakhulu ngamakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe ngezindinganiso ezisezingeni eliphakeme njengokulondolozwa kwamandla, ukuvikelwa kwemvelo, ukuphepha, umsindo ophansi, induduzo, nesisindo esincane.
I-SONGZ ibilokhu ihambisana necebo lomkhiqizo "elisebenza kahle, elonga amandla futhi elinobungani nemvelo" ne-high-tech, ikhwalithi ephezulu, insizakalo ephezulu "yomqondo wokumaketha wezobuchwepheshe, ozimisele ukuba ngungoti wezokuphatha ezishisayo wezimoto ezisezingeni lomhlaba.
Amandla Wokukhiqiza we-SONGZ
I-SONGZ yethula izixhobo ezihola phambili emhlabeni kanye nohlelo lolwazi ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kahle kokukhiqiza, ukuzinza nokunemba.
Izinsizakusebenza ezithuthukile ezifana nolayini wokukhiqiza ogcwele-othomathikhi, ulayini wokutholwa kwe-ammonia othomathikhi, umugqa wokucubungula othomathikhi wamapuleti ashukumisayo futhi amile we-vortex, Umshini ophakeme wejubane, umshini wokushisela we-argon othomathikhi, isithando somlilo kanye nomshini wokushisela we-laser kuthuthukisa kakhulu umkhiqizo ukusebenza kahle.
I-SONGZ ihlanganisa izinsizakusebenza nolwazi kanye ne-Informatization kanye ne-industrialization futhi yakha ifektri ekhaliphile eyidijithali isebenzisa amasistimu wolwazi afana ne-ERP, MES ne-WMS.
Umugqa Wokutholwa Kwe-ammonia Okuzenzakalelayo
Isivinini se-Fin Machine
Okuzenzakalelayo Argon Arc Welding Machine
Isithando Somlilo SaseBrazil
Ngenkathi ye-Industry 4.0, i-SONGZ yakha ngenkuthalo izimboni ezithuthukile kwezobuchwepheshe, isungula ukukhiqizwa okuhlakaniphile, idala umgomo wamabhizinisi ahlakaniphile, ithuthukise izinga lokuphathwa kwamabhizinisi, yenza ukuphathwa kokukhiqiza kususelwe olwazini, okuzenzakalelayo, kwedijithali nakwezesayensi, kuthuthukisa ukukhiqizwa ukusebenza kahle, futhi kuthuthukisa amabhizinisi Ukwenza ngcono ukukhiqizwa.
Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi ye-SONGZ
Inqubomgomo yekhwalithi: Yenza izindinganiso zohlelo futhi ugxile ekwanelisekeni kwamakhasimende.
Win ukwaneliseka kwamakhasimende ngokulinganisa okuqhubekayo nokubuyekeza.
Inqubomgomo Yemvelo: Ukuvikelwa kwemvelo, ukongiwa kwamandla kanye nokwehliswa kokusetshenziswa, ukuvuselelwa kabusha, ukubandakanyeka ngokuphelele, ukuthobela umthetho kanye nokwenza ngcono okuqhubekayo.
Inqubomgomo Yezempilo Nokuphepha Emsebenzini: Impilo kuqala, ezokuphepha kuqala, ukuvimbela isayensi, ukuzibandakanya ngokuphelele, ukuthobela umthetho kanye nokwenza ngcono okuqhubekayo.
I-SONGZ iphoqelela ngokuqinile i-TS16949 futhi igxile ekwanelisekeni kwamakhasimende, ukubandakanyeka okuphelele nokuphathwa kwekhwalithi. Ngesikhathi sokulawulwa kwekhwalithi okungenayo, i-SONGZ iyaqhubeka nokwenza ngcono uhlelo lwesampuli ukuze luthembeke futhi ithuthukise ngokuqhubekayo amathuluzi wokuhlola enokwethenjelwa kwemiphumela yokuhlolwa. I-SONGZ manje inamathuluzi wokuhlola angama-527 ahlaziya amathuluzi okuhlola ngokuya nge-MSA ukuze anelise izidingo. Ngaphandle kwalokho, i-SONGZ iqinisekisa ukufana kwemikhiqizo ngokubukeza, ukwenza kahle nokuqeqesha abahlinzeki futhi kuthwala ukuhlolwa kwethu komuntu wesithathu kwezingxenye ezibalulekile minyaka yonke ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zokupholisa umoya zisebenza kahle futhi zithembekile. Ngesikhathi sokulawulwa kwenqubo, i-SONGZ ikhuthaza ukubandakanyeka okuphelele, ukuhlolwa kokubambisana, ukuhlolwa kokuqala nokugcina nokuqapha inqubo yonke. Okwezinqubo ezisemqoka, amathuluzi wokuhlola asebenza kahle ayamukelwa ukuqinisekisa ukuthembakala komkhiqizo nemishini yokuthola othomathikhi ephelele yamukelwa ngokukhethekile ukuqina komoya kohlelo lokupholisa umoya. Imishini yokuhlola yokuphepha emithathu kokukodwa iyamukelwa ukuze yanelise izidingo zokuphepha komkhiqizo. Ukuhlolwa okuphelele kuyenziwa ukuqinisekisa ukuphepha komkhiqizo nokwethembeka. Inqubo esemqoka iyahlaziywa kusetshenziswa i-SPC ukuze kuqinisekiswe ukuzinza nokunikela ngemininingwane yokuhlaziya ekuthuthukiseni ikhwalithi.
Ukusetshenziswa komkhiqizo we-SONGZ ngokuya ngempendulo yemakethe, kukhombisa ngokuphelele futhi ngokweqiniso isimo jikelele ngenhlolovo yokwaneliseka, yenza iPDCA futhi ithuthukise ngokuqhubekayo ikhwalithi yomkhiqizo.
I-BS OHSAS 18001: 2007
I-GB / T 19001-2008 / ISO 9001: 2008
I-ISO 14001: 2015
I-SONGZ Ihlonipha Udonga
Kusukela yasungulwa ngo-1998, i-SONGZ inqobile ukwaneliseka nokudunyiswa okuvela kumakhasimende ethu avela eChina nakwamanye amazwe njengomhlinzeki omuhle kakhulu nesixazululo somhlinzeki wezinhlelo zokupholisa umoya.
Lokhu kubaluleke kakhulu ukugqamisa ukuthi i-SONGZ yathuthukisa ngokuzimela "i-Manufacturing Technology kanye nokusetshenziswa kwama-Micro Channel Tubes kanye ne-Heat Exchangers", futhi iphrojekthi yazuza umklomelo wesibili "we-Chinese National Science and Technology Progress Prize", okuwudumo oluphakeme kakhulu oluvela eMkhandlwini Wombuso wase-China embonini yezemishini yokupholisa umoya.
Futhi i-SONGZ iwine ukuqashelwa okuvela embonini yezimoto efaka umoya opholile nasemphakathini ngenxa yeminikelo eyenziwe yi-SONGZ ekuthuthukiseni ubuchwepheshe embonini yokupholisa umoya nomthwalo wemfanelo kwezenhlalo othathwa yi-SONGZ.
Umhlinzeki Ohamba phambili we-CRRC, China
Umhlinzeki Ohamba phambili We-Foton, China
Umhlinzeki Ohamba phambili weHino, Philippines
Umhlinzeki Omuhle weSANY, China
Umpetha Wenkonzo Yama-Olimpiki waseBeijing
I-China National Science & Technology Progress Award
Isitifiketi sokugunyazwa se-CNAS Lab
Isitifiketi Sokugunyazwa Kwelabhorethri Yomhlinzeki se-BYD
Isimiso Sebhizinisi:Lwela ukwenza ngcono indawo yokuphila komuntu.
Umbono Webhizinisi:Yiba umhlaba'Abahlinzeki be-air-conditioner yesigaba sokuqala.
Inqubomgomo Yokuphatha:Ukwaneliseka kwamakhasimende, ukwaneliseka kwabasebenzi, ukwaneliseka kwesitoko.
I-SONGZ Isiko Lamabhizinisi
Isiko ngumphefumulo webhizinisi nomqondo wesiko ngamandla angabonakali okusebenza nokuphathwa. I-SONGZ ibilokhu ihambisana nomqondo wamasiko wokuthi "abantu bathambekele" iminyaka.
I-SONGZ inika bonke abasebenzi isigaba esikhulu, ivusa umdlandla wabo ngokuphelele, ibenzele futhi ibanikeze amathuba afanele ngabo futhi banethemba lokuthi bazokhula kanye nabo.
Amasiko Eqembu Lase-SONGZ:
SONGZ Team Ukuhlakanipha
Bambisana ne-Absolute Sincerity futhi Ugxile Ekuthuthukisweni Kwesikhathi Eside.
Impumelelo yebhizinisi inqunywa ukusebenzisana. I-SONGZ inethimba labaphathi eliqeqeshiwe nelithembekile elikhula ndawonye nenkampani futhi eliholela kubasebenzi ukufeza izinhloso zabo ngamandla okuhlangana aqinile, umqondo oqinile wokuzibophezela nomoya wokuzimisela ongahlulwa.
Iya phambili ngenhliziyo enokubonga, futhi uvune ubuhle ngokuzikhandla.
SONGZ, Kwakha inkathi entsha mobile air conditioning!